Dr. Tint Swe's Writings: Abdominal Pain ဗိုက်နာတယ်ဆိုတာ
(အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ကျော်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဆောရီး။)
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ သိချင်တာလေးမေးပါရစေရှင့်။ ကျွန်မ အသက်က ၂၇ နှစ်၊ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၊ ၅ရက် လောက်တည်းက ဗိုက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ခြမ်းမှာ တင်းတင်းကြီးဖြစ်ပြီး နာနေပါတယ်ဆရာ။ ဒီတိုင်းနေရင် သိပ်မသိသာပေမယ့် လမ်းသွားတဲ့အခါ မတ်မတ်လမ်းမလျောက်နိုင်အောင် နာနေပါတယ်။ လေထလို့နာတယ်ထင်ပြီး အဲအိတ်စ်သောက်ပါတယ်ဆရာ။ ခဏသက်သာသလိုဖြစ်ပေမယ့် အရှင်းမပျောက်သွားပါဘူးရှင်။ ၀မ်းလည်း မှန်ပါတယ် ဆရာ။ သို့ပေမယ့် အစာစားတာနဲ့ ဗိုက်ထဲနာပြီး ချွေးစေးတွေပြန်ကာ အိမ်သာသွားချင်သလိုမျိုးဗိုက်နာလာပါတယ်ဆရာ။ အရင်တည်းက ကျွန်မက အစာအိမ်ရောဂါအခံရှိပါတယ်ဆရာ။ လတ်တလောမှာ ဘာဆေးသောက်ထားရမလဲ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းညွှန်ဖြေကြားပေးပါ ဆရာရှင့်။
ဗိုက်အောက်ပိုင်းဆိုတာ အစာအိမ် မဟုတ်။ လေနာ မဟုတ်လောက်။ အမျိုးသမီးတွေ မျိုးဥအိမ်ဘယ်ဘက်နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်ကို စဉ်းစားရ။ ရာသီ မသိ။ တခုခုဆင်း မဆင်း မသိ။
ဆရာရှင့်။ ရာသီ တလတခါ မှန်ပါတယ်ဆရာရှင့်။ လတိုင်း ဗိုက်တအား အောင့်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ယခုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က ရာသီပြီးသွားခဲ့တာပါရှင့်။ သို့ပေမယ့် အစာဟောင်းအိမ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ကျွန်မ သေချာနားမလည်ပါရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့် မေးမြန်းပါသည်။
တခုခုဆင်း မဆင်းမေးတာ မဖြေသေး။ ရာသီလာစဉ်ဗိုက်နာခြင်းစာ ဖတ်နိုင်။
၂။ ဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၄ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ရာသီပုံမှန်လာပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မချက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက အောင့်အောင့်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်ခုန်တာ ကြာကြာလမ်းလျောက်တာတွေဆို နာလာပါတယ်ရှင့်။ တခါတလေ နေ့လည်စာစားတာနောက်ကျပါတယ်ဆရာ။ အစာလွန်မှစားလိုက်ရင်လဲ နည်းနည်း အောက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လက ultrasound ရိုက်ကြည့်ဘူးတာ ဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ result ထွက်ပါတယ်ဆရာ သားအိမ်ကြောင့်လား အူကြောင့်လား ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ သိပါရစေရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
အာလ်ထွာဆောင်းမှာ ကောင်းနေရင် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ပြောပြတာအရ အစာလမ်းကဖြစ်နိုင်တယ်။ အစာကို အချိန်မှန်စားပါ။ အမျိုးအစားတူစားပါ။ အဆာမခံလွန်းပါနဲ့။ စားချိန်မှာ မစားဖြစ်သေးရင် အချိုတခုခုစားသောက်ပါ။ ဘာမှမရှိလဲ ရေသောက်ပါ။
ဗိုက်ဆိုတာ လူ့ကိုယ်မှာ နေရာအများဆုံး ယူထားတယ်။ အထဲမှာ အင်္ဂါတွေကလည်း စုံလှတယ်။ နှလုံးနဲ့ အဆုပ်သာရှိတဲ့ ရင်ခေါင်းအောက်က ဗိုက်ဖြစ်တယ်။ ရင်ခေါင်းနဲ့ ဗိုက်ကို ဒိုင်ယာဖရမ် ခေါ် ကြွက်သား ခုံးခုံးကြီး တခုနဲ့ နယ်နိမိတ် ခြားထားတယ်။ အစာအိမ်၊ အူသိမ်၊ အူမကြီး၊ အစာဟောင်းအိမ်၊ အသဲ၊ ဘေလုံး၊ သည်းခြေအိပ်၊ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးပြွန်ဆိုတဲ့ အင်္ဂါတွေရယ် သူတို့နဲ့ တွဲနေတဲ့ သွေးကြောတွေ၊ (လင့်ဖ်) ကြောတွေ၊ အာရုံကြောတွေ၊ အမြှေးတွေ ရှိကြတယ်။ ဗိုက်နဲ့တဆက်တည်း အောက်မှာရှိတာက တင်ပါးဆုံပိုင်း။ သူအထဲမှာ ဆီးအိမ်၊ သားအိမ် (အမျိုးသမီး)၊ ဆီးအကျိတ် (အမျိုးသား) နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်တွေ ရှိကြတယ်။
လေနာမဟုတ်ဘဲ ဗိုက်နာတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အနာမဲ့သူ ရှင်ပါကူကလွဲရင် လူတိုင်းလိုလို ဗိုက်နာတာက ခဏခဏဖြစ်ကြရတယ်။ တချို့ ခွဲစိတ်ခံကြရတယ်။ ဗိုက်နာခြင်းအကြောင်းဟာ ခွဲစိတ်ဆေးပညာမှာ အများကြီးရှိတယ်။
၁။ Acute pain in abdomen ချက်ချင်းဖြစ်-အတင်းနာတာတွေကို ခေါ်တယ်။ ရမ်းကုဆရာတွေက နာတဲ့နေရာမှာ ဆေးထိုးတယ်။ နာတာကိုသိတဲ့ အာရုံကြောက အမျိုးမျိုးရှိနေလို့ ဗိုက်နာတာကို ရိုးရိုးစင်းစင်း၊ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ အဲလိုဖြစ်နေတာတွေထဲမှာ အများကြီးရှိတယ်။ ခွဲစိတ်ပညာမှာ အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။
၂။ Visceral pain မျိုးက အထဲအင်္ဂါတွေမှာ တခုခုဖြစ်လို့ ဟိုနားကလို၊ ဒီနားကလို အောင့်တာမျိုး။ Vague, Dull, Nauseating အန်ချင်သလိုလဲ နေတတ်တယ်။ ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းမှာ ရှိကြတဲ့ အစာအိမ်၊ အူသိမ်အစပိုင်း၊ အသဲ၊ သရက်ရွက်တွေမှာ ဖြစ်ရင် ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းမှာ နာတယ်။ အူသိမ်၊ အူအတက်နဲ့ အူမကြီးအစပိုင်းက ဖြစ်ရင် ချက်တဝှိုက်မှာ နာတယ်။ အူမကြီးနဲ့ ဆီးလမ်းကဖြစ်ရင် ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ နာတယ်။ Autonomic nerve ဆိုတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကြောင့်ဘဲ။
Somatic pain ဆိုတာက Parietal peritoneum ဗိုက်အတွင်းအဖုံး အပြင်လွှာမှာ Infection ပိုးဝင်ရင် နာတာမျိုးက စူးစူးရှရှ၊ နေရာအတိအကျ နာတယ်။ ဘာ့လို့လဲဆိုတော့ Somatic nerves ဆိုတဲ့ (ဆိုမက်တစ်) အာရုံကြောကြောင့်ဘဲ။
Radiating pain ဆိုတာ တနေရာမှာ ရောဂါဖြစ်နေပြီး ဘာမှမဆိုင်တဲ့နေရာမှာ သွားပြီးနာတာကို ခေါ်တယ်။ အသဲရောဂါ၊ သည်းခြေအိတ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါတွေကနေ ပခုံးထိပ်မှာ လာနာတတ်တယ်။ အာရုံကြောတွေက ခါးရိုးမကြီးထဲက Spinal cord မှာ လာဆုံနေကြလို့ဘဲ။ ညာပခုံးမှာ လာနာရင် Gall bladder stone သည်းခြေကျောက်၊ ဘယ်ပခုံးလာနာရင် Ruptured spleen ဘေလုံးကွဲတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Pancreatitis သရက်ရွက်ရောင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ Urinary stone ဆီးလမ်းကျောက်တည်တာကနေ Pubis ဆီးစပ်၊ Testis ကျားအစေ့၊ Vagina မွေးလမ်းကြောင်းအထိ နာလာတတ်တယ်။
ရောဂါရာဇဝင် ကောင်းကောင်းပြောတတ်ရင် ဆရာဝန်ကို ကူညီရာကျတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တာကိုယ် မပြောတတ်သူတွေ ရှိတယ်။ စကားပြောကောင်းသူတွေက ဟန်မကျဘူး။ ပိုပြောတတ်တယ်။ မေးသူတွေထဲက စာရေးကောင်းသူတွေက လူနာကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မီးခလုတ်ဖွင့်လိုက်တော့ မီးလင်းသလို ဗြုန်းစားကြီး နာလာတာမျိုးက Gastric perforation အစာအိမ်ပေါက်တာ။ Renal stone ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တာ၊ Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ပြီးပေါက်တာ။
• ဗိုက်နာတာက ဘယ်လိုနေရင် သက်သာသလဲ။ Peptic ulcer disease က Antacids သောက်လို့ သက်သာတယ်။ Peritonitis ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှာ အရာရာကိုဖုံးပေးးထားတဲ့ အလွှာလေးရောင်တာဆိုရင် အသာလေးလှဲနေလို့ သက်သာတယ်။
• ဗိုက်လဲနာတယ် အန်မယ်၊ ဝမ်းလဲလျှောတာမျိုးက အစာလမ်းရောင်တာ။ ဗိုက်နာတာ ကြာပြီးမှ အန်လာမယ်၊ အူတွေလှုတ်ရှားသံ မကြားရသူဟာ ရုတ်တရက်အူလမ်းပိတ်တာ။ ဗိုက်နဲ့မဆိုင်ဘဲ ဗိုက်နာတာမျိုးတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ (ဗယ်လီ) ကြွက်သားမှာ သွေးခဲ နေတာ၊ ကျားအစေ့လိမ်နေတာ၊ ရေယုံ၊ အရက်နာ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အဆုပ်သွေးခဲပိတ်၊ အဆိပ်သင့်တာတွေ၊ ပင့်ကူကိုက်တာ၊ ဘိန်းဖြတ်တာတွေဖြစ်တယ်။
ရောဂါတွေ တန်းစီရေးပြရတာကို ဖတ်ပြီး၊ သိပ်မကြောက်စေချင်ပါ။ စုံအောင် မရေးရင် ထိန်ချန်မှု ရောက်မှာ စိုးလို့ပါ။ ဗိုက်နာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် မနာသူများ၊ ဆရာဝန်မပြခင် လှမ်းမေးချင် မေးနိုင်ပါတယ်။ ကုတဲ့နည်းတွေ မရေးသေးပါ။ မေးတဲ့သူကိုတော့ တိုက်ရိုက် ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းသားတွေသာ စာအများကြီး ဖတ်ရတဲ့ဇာတာ ပါတယ် မဟုတ်လား။
လူဆိုတာ နာတာမခံချင်ကြဘူး။ ဒီလိုဖြစ်သူတွေက ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ နာတာကို သာယာသူတွေ ရှိတယ်။ အနာခံမှ အသာစံရမယ်ဆိုတာကို သိလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က Sadism (Sadomasochism) ခေါ်တဲ့ စိတ်ခြေအနေတမျိုး ရှိသူတွေ။ အနာခံချင်ကြသတဲ့။ အမှန်က ဗိုက်ထဲကနာနာ၊ ဘယ်ကနာနာ၊ နာတာ မကောင်းပါ။
1. Appendicitis treatment with Antibiotics အူအတက်ရောင်တာ မခွဲဘဲရသလား http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/appendicitis-treatment-with-antibiotics.html
2. Appendix အူအတက် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/appendix.html
3. Dysmenorrhea ရာသီလာရင်နာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/dysmenorrhea.html
4. Endometriosis (1) သားအိမ်ရောဂါ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/endometriosis-1.html
5. Endometriosis (2) သားအိမ်ရောဂါ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/endometriosis-2.html
6. Endometriosis (3) သားအိမ်ရောဂါ (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/endometriosis-3.html
7. Gallstones https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/gallstones.html
8. Kidney stones ကျောက်ကပ်-ကျောက် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/01/kidney-stones.html
9. Menstrual Suppression သင်္ကြန်နဲ့ရာသီ၊ ရာသီနဲ့သင်္ကြန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstrual-suppression.html
10. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/peptic-ulcer-diagnosis.html
11. Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/peptic-ulcer.html
12. PID အမျိုးသမီးတင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pid-3.html
13. Submucous fibroids သားအိမ် အတွင်းလွှာက အလုံး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/uterine-fibroid.html
14. Uterine Fibroid (1) သားအိမ်အလုံး (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/submucous-fibroids.html